जेल जाने निश्चित भएपछि काठमाडौँबाट भागे नवराज सिलवाल, पुगे मलेसियाको क्वालालम्पुरमा !
ARCHIVE » जेल जाने निश्चित भएपछि काठमाडौँबाट भागे नवराज सिलवाल, पुगे मलेसियाको क्वालालम्पुरमा !
काठमाडौं प्रहरी परिसरले एमालेका सांसद तथा पूर्वडिआइजी नवराज सिलवाललाई तुरुन्त्र पक्राउ गरी उपस्थित गराउन लालितपुर प्रहरीलाई पत्र काटे पछि उनी रातारात काठमाडौँबाहिर भागेका छन् । पूर्वडिआइजी एवं साँसद सिलवालको घर लालितपुर गोदावरीमा रहको छ ।
मुद्धा खेपिरहेका सिलवाललाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते गरेको आरोपमा पत्र काटेको हो । पक्राउ पर्ने डरले सिलवालले उपत्यका छाडिसकेको श्रोतले बताएको छ । उनले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर धरै रहेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने तयारी गरेपछि सिलवालले यस्तो गरेका थिए ।